Monday June 20, 2022 - 17:59:24
Dowladda Federaalka ayaa ka sheeganaysa dhaqaale xumo baahsan xilli ay hoos udhaceen taageeradii dhaqaale ee dowladani ka heli jirtay shisheeyaha.
Cabdiraxmaan Beylle oo ah wasiirka maaliyadda ayaa beeniyay warar maalmihii lasoo dhaafay laysla dhaxmarayay oo sheegayay in qasnadda dowladda ay buuxdo.
Beylle wuxuu sheegay in Bankiga dhexe uu yahay mid sii faaruqayo islamarkaana aysan awood ulaheyn in bilaha soo socda ay bixiyaan mushaaraadka ciidamada iyo midka shaqaalaha dowladda.
"Aniga waxaa ley weeydiiyay Bishaan 25-keeda ka bixin kartaan mushaarka, haa baan iri balse wixii ka dambeeya hadii aan la dadaalin la waayi karo, hayeeshee hadii la dadaalo la heli karo mushaarka Ciidamada iyo Shaqaalaha dowladda" ayuu yiri Beylle.
Wasiirka maaliyadda ayaa intaas ku daray in laga been sheegay dhaqaalaha wasaaradda isagoo mas'uuliyad darro ku tilmaamay in isaga laga been sheego "waa been kuwa oranaya Lix bilood qarashkeeda ayaa lahayaa runtii waana mas'uuliyad darro in umadda been loo sheego" ayuu warkiisa sii raaciyay.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay taageerayaasha Nabad iyo Nolol sheegeen in Farmaajo uu xilka ka degay iyadoo qasnadda wasaaradda Maaliyadda ay ka buuxdo lacagtii lagu shaqeyn lahaa 6da bil ee soo socda.
Wasiir Beylle oo diiday in uu tago Xafiiska Xeer ilaalinta.